Tanktastic 3D tanks 2.3 Android အတွက် Aptoide APK အား ဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်ပါ
ဗားရှင်း 2.3 လွန်ခဲ့သော 1 နှစ်က
ဂိမ်းများ အက်ရှင် Tanktastic 3D tanks
Tanktastic 3D tanks ၏ ဖော်ပြချက်
<b>Tanktastic isagame for tank battles fans of all ages!</b>
* <i>Tanktastic does not require an Internet connection, you can play offline.</i>
* <i> Optimized for Intel x86 devices</i>
Tanktastic 3D tanks အတွက် အသုံးပြုသူ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
Tanktastic 3D tanks အပေါ် ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုများ
Tanktastic 3D tanks အပေါ်တွင် ပြန်လည် စစ်ဆေးမှု မရှိပါ။ ပထမဆုံး ပြုလုပ်လိုက်ပါ!
carlosgarrido89 စတိုး 12.18k 1.86M
Tanktastic 3D tanks နှင့် အလားတူသော အက်ပ်များကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ
APK အကြောင်း Tanktastic 3D tanks အချက်အလက်
ထုတျလုပျသူ G.H.O.R. Corporation
ကိုယျရေးလုံခွုံမှု မူဝါဒ http://ghor.com/privacypolicy.htm
လကျမှတျ SHA1: 31:1E:3C:08:AD:04:70:1B:E7:E3:87:52:1E:10:51:35:EA:19:D2:5A
အဖှဲ့အစညျး (O): G.H.O.R. Corporation
နယျမွေ (L): Las Vegas
ပွညျနယျ/မွို့တျော (ST): Nevada
Tanktastic 3D tanks APK ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ